चुनावी अभियानलाई कसरी बढाउनु भएको छ ?
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को तर्फबाट साझा उम्मेदवारका रुपमा दाङ क्षेत्र नम्बर ३ को प्रदेशसभाका लागि प्रतिष्पर्धामा छु । म आफै प्रचारप्रसारमा हिँडिरहेको छु । साथै प्रतिनिधी र समानुपातिक उम्मेदवारहरु पनि चुनावी प्रचारमा हुनुहुन्छ । त्यसका साथै अहिले दुवै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू चुनावी अभियानमा छन् ।
वाम गठबन्धन भएपछि नेताहरूमा उत्साह हुनु स्वभाविक छ । त्यस भन्दा पनि कार्यकर्ता र स्थानीयमा उत्साह ज्यादै पाएको छु । उम्मेदवारी दर्ता गरेको करिब १५ दिन प्रचार गर्न नपाए पनि नेता तथा कार्यकर्ताहरू प्रचारप्रसारमा खटिनुभएको थियो । अहिले सबैमा उत्साह छ । गठबन्धन बलियो भएर पश्चिम दाङमा उदाएको छ । २०७० सालको भन्दा उत्साह असार १४ मा आएको थियो भने अहिले त्यो उत्साह २ गुणा बढेको महसुस मैले गरेको छु ।
जनताका अपेक्षा के छन् ?
जनताका चाहाना र अपेक्षाहरू धेरै ठुला छैनन् । सामान्य जीवनका चाहाना छन् । सधैँभरी मत दिएर नेतालाई जिताएर पठाउने तर आफ्नो पक्षमा काम नहुने धेरै गुनासा जनतामा मैले पाएको छु । २०७० सालमा म आफै दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका कारण पश्चिम दाङका जनताको चाहाना के छन् भनेर बुझेको पनि छु । सधैँभरी जनतासँग सम्पर्क भइरहोस्, जनताको सुख–दुःखमा नेता आएर प्रत्यक्ष ढाडस दिने काम गरोस् । जनतालाई यात्रा गर्नका लागि सडक यातायात निर्माण हुनुप¥यो । मेरो प्रदेशमा रहेका २५ वटा वडाहरु छन् ती वडाहरूलाई जोड्ने गरी चक्रपथ निर्माण गर्ने योजना बनाएको छु ।
सिंचाई, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका समस्याहरू रहेका छन् । जनताका माझमा त्यही कुराहरू आगामी पाँच बर्षमा पुरा गर्नुपर्नेछ । त्यही काम गर्नका लागि मैले उम्मेदवारी दिएको छु । मंसिर २१ गते हुने निर्वाचन मार्फत् मलाई विजयी गराए भने यही काम गर्न म तत्पर रहने जानकारी गराउँछु । जनताका अपेक्षा चाहाना पनि यही छन् ।
तपाईँलाई नागरिकले भोट दिनुपर्ने आधार के हो ?
यतिबेला सबै तह र तप्काबाट अधिकारका कुराहरू उठिरहेको छ । यहि समयमा पश्चिम दाङको विकास र निकासका लागि मलाई वाम गठबन्धनले उम्मेदवार बनाएको हो । मेरो उम्मेदवारीले जनतामा उत्साह छाएको छ । नेताहरूमा पनि उर्जा आएको छ । पश्चिम दाङको मात्रै नभएर मेरो प्रदेशमा रहेका तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका १, २, १० र ११ नम्बर वडामा विकासको मूल फुटाउने चाहना छ । म यहिँको स्थानीय उम्मेदवार पनि हुँ । पश्चिम दाङलाई राम्ररी चिनेको छु । त्यसैसले मलाई नागरिक तथा मतदाताहरुले मत दिनुपर्छ ।
पश्चिम दाङको समृद्धिका लागि भए पनि मतदाताले मलाई मत दिनुपर्छ । मैले चुनावी कार्यक्रमका समयमा धेरै प्रतिबद्धता जनाएको छु । प्रतिबद्धता जनाएका योजनालाई सम्पन्न गराउन र पश्चिम दाङलाई समृद्ध गराउनका लागि मलाई मत दिनुपर्छ ।
तपाईँका जित्ने आधारहरु के—के छन् ?
यस पटक मैले नेकपा (एमाले)को नेता भएर मात्रै उम्मेदवारी होइन । अहिले नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच वाम गठबन्धन भएको कारणले पनि मैले जित्नै पर्छ । मलाई वाम गठबन्धनमा आस्था राख्ने नेता कार्यकर्ताहरूले जिताउनु पर्छ । २०७० सालको प्रतिष्पर्धी उम्मेदवार भएको र २०७० सालपछि म निरन्तर पश्चिम दाङका जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क रहेको नेता पनि हुँ म । अर्को कुरा, हाम्रो पक्षमा असार १४ गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको पक्षमा धेरै मत रहेको छ । त्यही मतलाई संरक्षण गर्ने र अरू विचार राख्ने साथीहरूको मतलाई तान्ने प्रयासमा हामीहरु रहेका छौँ । समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा हामीहरू भएकै कारण मैले जित्छु र वाम गठबन्धनले जित्छ ।
जितेर गए पछि तपाईँले यो क्षेत्रको लागि के गर्नुहुन्छ ?
दाङ जिल्लामा विकासको दृष्टिले कोही क्षेत्र यदि पिछडिएको छ भने त्यो पश्चिम दाङ हो । कसैले विकासबाट बञ्चित गरायो भने त्यो पश्चिम दाङ हो । तुलसीपुरको पातुखोला सुरु भएपछि विकासबाट टाढा रह्यो । त्यही अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि मेरो उम्मेदवारी हो । मलाई यही कुराको अन्त्यका लागि पश्चिम दाङका जनताले विजयी गराउनुपर्छ ।
मैले चुनावी सभाका क्रममा पनि भनेको छु । मैले जितेको ६ महिनामा पश्चिम दाङमा विकासले केही गति लिनुपर्छ । मैले जितेँ भने पश्चिम दाङका मुख्य र सहायक सडक कालोपत्रे हुन्छन् । सबै बस्तीमा एम्बुलेन्स पुग्ने सडक निर्माण हुन्छन् । सञ्चार सम्पर्क नहुने गंगटे, मलईखोला लगायतका क्षेत्रमा सकभर सरकारी नभए निजी सञ्चार कम्पनीसँग सम्झौता गरेर सञ्चार सम्पर्क स्थापित गराउने काम हुन्छ । त्यस्तै स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ । शिक्षाको स्तर बदलिन्छ । सिंचाई, खानेपानी, कटान समस्या समाधनका लागि मेरो पहिलो प्राथमिकता हुन्छ । यही कुरालाई विश्वास गरेर पश्चिम दाङका विभिन्न क्षेत्रमा भएका चुनावी सभा, घरदैलो, भेटघाटका क्रममा प्रतिबद्धता जनाएको छु । यही ढंगले मैले मेरो क्षेत्रमा विकास गर्नेछु ।
चुनावको बेला बाचा गर्ने तर पछि गाउँ नै फर्किदैनन् भन्छन नि उम्मेदवारहरूलाई ?
हिजोका दिनमा यही प्रवृत्ति राजनीतिमा भित्रीएका कारणले गर्दा स्थानीय जनतामा राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा पैदा भएको छ । यस्तो प्रवृत्ति अन्त्यका लागि मेरो उम्मेदवारी हो । म २०७० सालमा पनि उम्मेदवार बनेर थोरै मतान्तर उपविजेता भएको नेता हुँ । अहिले मैले निर्वाचन नलड्ने भने पनि सधैँभरी जनताको बीचमा सम्पर्कमा रहेकै कारण जनताले उम्मेदवार बन्नुपर्छ भनेर दवाब दिएकै कारण उमेदवार बनेको छु ।
हिजो अरुले के गरे म त्यतातिर जान्न । चुनाव हारे पनि म निरन्तर जनताका पीरमर्का बुझ्ने नेता भएका कारण चुनाव जितेर नफर्किने नेता म होइन । त्यसैले मलाई कुनै शंका नगर्दा हुन्छ । किनभने म धेरै कुरा गर्ने होइन जनतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने भएका कारण यस्तो प्रश्न आगामी दिनमा कसैले गर्नुपर्दैन ।
जनताको बीचमा उत्साह व्यापक छ । वाम गठवन्धनको पक्षमा अपार समर्थन देखिएको छ । मैले मात्रै होइन, दाङ जिल्लाका सबै उम्मेदवारले जित्ने निश्चित भएको छ । हामीलाई जनताले गरेको माया देखेर कतिपय त अत्तालिएका छन् । म एक पटक फेरि सवै मतदातालाई मंसिर २१ गतेका दिन वाम गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न आग्रह गर्दछु ।